Ukujikeleza ndawonye - Wikipedia
RI-rotation yintshukumo eyenziwa yi-object ngokwenza intshukumo jikeleza eyenziwa yokujikeleza ndawonye.
I-sphere sijikeleza kwindawo esimi kuyo okanye kwi-axis yaso
Into ekumila kuzii-dimensional ezimbini ijikeleza isazinge (okanye umbindi) somjikelezo. Into ekumila kuzii-dimensional ezintathu ijikeleza okwesazinge somgca obizwa ngokuba yi-axis. Ukuba i-axis yomjikelezo ikwalapha esiqwini, kuthiwa isiqu siyazijikeleza ngokwaso, okanye senza isizungelezane - nto leyo ethetha okokuba ijikeleza ngesantya esithile, ukanti mhlawumbi iyazijikelezela nje ingalawulwa nto oko ikwenza nge-angular momentum. Ukujikeleza okusuka kwindawo engaphandle (umzekelo umhlaba ojikeleze ilanga) ubizwa ngokuba yi-orbit okanye ngokuthe chatha ubizw ngokuba yi-orbital revolution.
1 Iintlobo zokujikeleza
1.2 Iimatshini zokuzonwabisa
2 ezinye ii-websites
ukujikeleza isazinge endaweni enye kusenokuba kumkhondo olandelwa yi-clockwise okanye owe-anticlockwise.
Kwiintlobo-ntlobo zokubhabha, okanye zokuhamba emoyeni, ezo zizezona zinkulu zaziwa ngokuba ziyi-pitch, i-roll kunye ne-yaw. igama elithi rotation likwasetyenziswa kuhabo ngomoya ukubhekisa kwipitch yenqwelo-moya ebheka phezulu, ingakumbi xa iqalisa ukusuka emhlabeni. Amagama anje ngala ayasetyenziswa kwiintlanzi ezihamba ngamanzi.
Iimatshini zokuzonwabisa zezokujikeleza. Ivili le-Ferris kunye nevili le-observation hline-axis ekwisenta e-horizontal, kunye ne-axis e-parallel kwi-gondola nganye, ngozibuthe, okanye ngomatshini.
Ukujikeleza, kuhlala kubizwa ngokuba kukwenza isajinge, kudlala indima enkulu kwiinkqubo zemidlalo ezininzi. I-Topspin kunye ne-backspin kwintenetya. IsiNgesi, silandela size senze i-draw kwi-billiards ne-pool. Iibhola ze-Curve kwi-baseball nakwi-spin bowling ye-cricket. Iipaddles ze-Table tennis azibaluleke ngokuthi zivumele abadlali ukuba bajikelezise ibhola ngeli lixa beyibetha.
Last edited on 6 EkaTshazimpuzi 2016, at 08:56
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-6 EkaTshazimpuzi 2016, kwi-08:56